Jimicsiga iyo cunto qaadashada - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Jimicsiga iyo cunto qaadashada
La daabacay fredag 10 augusti 2012 kl 15.44
Qof ordaya. Arkivfoto: Åke Erlandsson/SVTBild
Waxaa dalka Iswiidhan ku soo kordhaya dhibaatooyin xagga cilmi nafsiga oo ku soo badanaya dadka sida aadka ah jimicsada ama u alameenteeya ee hadana quuta cunto yar oo ah kuwa caafimaad ahaanta waangsan.
Arrintan ayaa lagu micneeyay waxa loogu magac daray ortorexi waana ifafaalo lagu tilmaamo dadka sida aadka u jimicsada haddana cuno cunto xadidan oo ah cunada ay qaataan dadka alameenteeya haddii qofka uusan sidaasi yeelina uu dareemayo wel wel.
Waxaa aad u adag in la sheego tirda dadka uu heysto dhibkan sida uu baahiyay Raadiyaha Iswiidhan waayo weli lagu sammeyn qiimeyn caafimaad arrintan oo caafimaad ahaan lagu tilaamin in ay cudur tahay jahawareerka xagga cunto qaadashada dalka iswiidhan.
Hanna Kihlander oo ka tirsan urur la yiraahdo Anorexi- och bulimikontakt oo ah koox taageerta dadka ay ka wareerto qaadashada cuntada ayaa sheegtay in ay soo bateen dadka soo waca ururkooda ee ka hadlaya wel wel kala darsay jimicsiga.
"Dhibaatooyinka ku saabsan jimicsiga iyo qaadashada cuntada waa kuwa soo kordhaya ", ayay Hanna tiri mar ay la hadashay Raadiyaha Iswiidhan.
Yvonne Lin oo ka tirsan xarunta dadka qaba dhibaatoyin xagga cunto qaadashada ah ayaa iyana u sheegtay Raadiyaha Iswiidhan in weli si rasmi ah aan go’aan loogu gaarin caafimaad ahaan in cudur uu yahay arrinkaasi sidaasi daraadeedana aysan heyn tirakoob ku cad tirada dadka ee dhibkaasi uu heysto.
Hase yeeshee Yvonne ayaa sheegtay in xanuunka anorexia and bulimia in inta badan uu ku dhaco dumarka halka xanuunkan kale ortorexi oo si isku mid ah ugu dhaco ragga iyo dumarka.
Yvonne Lin ayaa sheegtay in keliya waqti yar uu inaga xigo xiliigii cudur loo aqoonsan lahaa ortorexi.
"Wax yeelada cilimi nafsiga waa kuwo xun si la mid ah sida dhibaatooyinka kale ee cuno qaadashada la’aanta", ayay tiri Yvonne Lin